Galmudug oo ka dhawaajisay hadal sii fogeyn kara Ahlu-Sunna - Caasimada Online
Home Warar Galmudug oo ka dhawaajisay hadal sii fogeyn kara Ahlu-Sunna
Galmudug oo ka dhawaajisay hadal sii fogeyn kara Ahlu-Sunna
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiir ka tirsan maamulka Galmudug ayaa ka hadlay qoraalkii dhawaan kasoo baxay maamulka Ahlu sunna ee gobolada dhexe oo ku aadanaa in dib loo dhigo doorashada Galmudug, islamarkaana heshiis lala galo Ahlu sunna.
Wasiirka Wasaarada Dastuurka iyo dib u heshiisiinta maamulka Galmudug Cismaan Maxamed Cali oo saxaafada kula hadlay magaalada Cadaado ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan hadalka heshiis lala gala Ahlu sunna.
Laakiin wuxuu ka dhawaajiyay hadal sii fogeyn kara Ahlu sunna kaasi oo ah in wadahadalka iyo heshiiskaba lala galayo Ahlu sunna marka ay dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug.
Laakiin Ahlu sunna ayaa dooneysa inay qeyb ka noqdaan maamulka cusub ee Galmudug, waxayna qasbi doontaa ka hor doorashada haddii aan lala hadlin inay sii fogaadaan oo ay ku dhaganaadaan mowqifkoodii hore.
Sidoo kale Waxaa uu tilmaamay in Galmudug ay tahay maamul goboleed la aqoonsan yahay ,islamarkaana dowladda Soomaaliya ay uga digayaan in ay soo fara geliso, laakiin wuxuu u sheegay madaxda Ahlu sunna iney isku soo sharaxi karaan xilka madaxweynaha.